WARKA PREMIER LEAGUE: Yaa Dhaawacan, Ayuu Shaki Ku Jiraa Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Kooxaha Premier League Kadib Fasaxii Xulalka – Kooxda.com
WARKA PREMIER LEAGUE: Yaa Dhaawacan, Ayuu Shaki Ku Jiraa Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Kooxaha Premier League Kadib Fasaxii Xulalka
Horyaalka Premier League ayaa soo Laaban doona todobaadkan kadib markii ay soo dhamaadeen laba todobaad oo ay socdeen ciyaaraha caalamiga ah ay xiddigaha ka qayb gala tartankaas u safreen adduunka daafihiisa soona guteen waajibaadka xulalka qaramadooda.
Taageerayaasha premier League ayaa si aad ah ugu faraxsan in ay macasalaameeyeen fasaxa xulalka si ay dib ugu helaan kulamada horyaalka premier League oo meel xiiso leh maraya.
So kasta ha ahaatee kulamadii la soo ciyaaray ayaa saamayn ku yeeshay qaar ka mid ah kooxaha premier league kuwaas oo ay xiddigohoodu dhaawacyo soo gaadheen.
Hadaba waxa aan halkan ku soo gudbin doonaa cida ka dhaawacan ama xiddigaha shakigu ku jiro in ay kooxohooda u ciyaaraan todobaadkan kadib fasaxa xulalka.
Luca Torreira ayuu soo gaadhay dhaawac Canqawga ah kulankii uu xulka qarankiisa Uruguay guusha ka gaadhay xulka Mexico jimcihii hore laakiin xiddiga 23 jirka ah yaa lagu arkay tababarka Arsenal waxana laga yaabaa in uu taam u noqdo kulanka Newcastle, sidoo kale Alex Iwobi.
Laurent Kosicelny ayaa dhankiisa wali ka soo kabsanaya dhaawac wakhti fog ah halka xiddiga Sead Kolasinic uu dhaawac jilibka ah ku seegi doono kulanka, da,yarka Ainsley Maitland-Niles ayaa isagu ku seegi doona kulanka dhaawac jab lugta ah halka xiddiga Carl Jenkinson uu ku seegi doono dhaawac kuraanta ah.
Cesc Fabregas ayaa la filayaa in uu taam u noqdo kulanka kooxdiisa kadib markii uu ka soo kabsaday dhaawac jilibka ah inkasta oo laga yaabo in uuna ku bilaaban shaxda kooxdiisa.
Goolhaye Simon Mignolet ayuu dhaawac yar ka soo gaadhay feedhaha halka Adam Lallana laga saaray xulka England kadib dhaawac canqawga ah oo soo gaadhay laakiin labadoodaba waxa la filayaa in ay taam u noqdaan kulanka.
Xiddiga Alex Oxlade-Chamberlain ayaa isagu wali ka soo kabsanaya dhaawac jilibka ah halka Dejan Lovren uu ku soo dhawaanaya in uu ku soo laabto garoomada.
Raheem Sterling ayaa laga reebay xulka England kadib dhaawac dhabarka ah ee soo gaadhay laakiin waxa la filayaa in uu taam u noqdo kulanka Fulham halka Danilo uu taam u noqon doono in uu ciyaaro kulankaas kadib kuraanta ah.
Bernardo Silva ayuu shaki ku jiraa in uu ciyaaro kulanka Fulham kadib markii dhaawac looga saaray kulankii Croatia, Xiddiga Kevin De Bruyne Ayaa ku seegi doona kulanka dhaawac jilibka ah, Claudio Bravo (Kuraanta) Iyo Eliaquim Managala (Jilibka).
Luke Shaw ayuu dhaawac madaxa ah ka soo gaadhay kulankii Spain waxana laga yaabaa in uu seego kulanka Watford inkasta oo uuna dhaawaciisu ahayn mid halis ah.
Marouane Fellaini ayaa laftiisa shaki ku jiraa in uu taam u noqdo kulanka kadib dhawwac yar oo dhabarka ah ka soo gaadhay kulamadii saaxiibtinimooyinka, halka Marcos Rajo uu taam u yahay kulankaas.
Phil Jones ayaa dhankiisa dhaawac ku seegi doona halka Marcus Rashford uu ganaax ku seegi doono kulanka Watford.
Dele Alli ayaa laga saaray kulankii England xillia kooxdiisu xaqiijisay in laga yaabo in uu seego kulanka Liverpool ee sabtida halka sidoo kale xiddigaha Hugo Lloris, Erik Lamela & Moussa Sissoko ay sidoo kale shaki ku jiro.